बैंक धेरै हुँदैमा अप्ठ्यारो हुँदैन-तुलसीराम गौतम
Posted: 2018-06-04 13:19:15
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत/
सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक-
तुलसीराम गौतमले तीन दशकभन्दा लामो समय बैंकिङ क्षेत्रमा बिताए । हालसेञ्चुरी कमर्सियल बैंकको नेतृत्व सम्हालेका छन् । सरकारी स्वामित्वको नेपाल बैंकबाट बैंकिङ क्षेत्रमा प्रवेश गरेका गौतमले यो क्षेत्रमा ३४ वर्ष बिताइसकेका छन् । हाल सेञ्चुरी बैंकको करिब ५१ अर्ब रुपैयाँ कर्जा हुँदा पनि क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो १५ प्रतिशत रहेको उनी बताउँछन् । क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियोका हिसाबले सेञ्चरीसँग अझै पनि ठूलो कर्जा दिन सक्ने क्षमता रहेको तर्कगर्ने गौतमसँग समग्र वित्तीय प्रणालीको अवस्थाका बारेमा गरिएको कुराकानीको संक्षेपः
बैंकिङ क्षेत्रमा लामो समयसम्म प्रणालीमा निक्षेपको समस्या भयो । यो कसको कमजोरीले हो ?
बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप नआउनुलाई बैंकरहरूको कमजोरी भन्न मिल्दैन । पछिल्लो समयमा कर्जाको माग उच्च भएकाले सोअनुसार निक्षेप वृद्धि नभएको हो । निक्षेप कति चाहिन्छ भनेर व्यक्तिगत मूल्याङ्कनभन्दा पनि कर्जाको मागले निर्धारण गर्छ । यसलाई तुलनात्मक रूपमा हेर्नुपर्छ । कर्जाको माग उच्च भएकाले त्यसका लागि आवश्यक निक्षेपको आपूर्ति कम भयो । निक्षेप पनि बढ्दै नबढेको होइन, तर कर्जाको तुलनामा निक्षेप कम बढेकाले ग्याप देखिएको हो । त्यसले गर्दा निक्षेपको खडेरी आएको हो ।
विगत लामो समयदेखि अस्थिर राजनीतिक वातावरण पछिल्लो समयमा स्थिरता उन्मुख हुनुका साथै देश संघीय मोडलमा गएको हुनाले विकास–निर्माणका काम सुरु हुँदा कर्जाको माग अझै बढ्ने देखिन्छ ।
सरकारले कर समयमा उठाइरहेको हुन्छ, तर विकास खर्च आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर मात्र गर्ने प्रचलन छ । त्यसले गर्दा बजारमा पैसाको आवश्यकता पर्छ । अब यो समस्या नहुन सक्छ । आगामी आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै खर्च हुने देखिन्छ । सरकारले आर्थिक वर्ष सुरु भएदेखि नै खर्च गर्न सुरु गर्ने र कर्जाको मागसँगै निक्षेपको पनि म्याच भएको खण्डमा निक्षेपको खडेरी नै पर्ने समस्या सहज हुन सक्छ ।
हामीकहाँ बचत गर्ने बानी कम छ । आन्तरिक तथा बाह्य रोजगार गर्ने नेपालीले उपभोगमा नै खर्च गर्ने प्रचलन छ । यसमा पनि सुधार आउनु आवश्यक देखिन्छ । बचत गर्ने बानीको विकास भएको खण्डमा बढ्दो कर्जाको मागलाई पनि थेग्ने निक्षेप आउने सम्भावना भने छ ।
नेपालीहरूको बचत गर्ने बानीमा सुधार गर्नका लागि बैंकहरूको कस्तो योगदान रहन सक्छ ?
बैंकहरूले बचत गर्ने बानीको विकासका लागि खोल्न सक्ने भूमिका भनेको बजारको महँगीअनुसारको ब्याजदर हो । पछिल्लो समयमा निक्षेपकर्ताले समान्यतः बजारको महँगीभन्दा धेरै नै पाएको अवस्था छ । आजभन्दा डेढ वर्षअघिको कुरा गर्दा बचत खातामा निक्षेपकर्ताले १ देखि ३ प्रतिशतसम्म मात्र ब्याज पाउँथे, तर अहिले बचतको ब्याजदर पनि ८ प्रतिशत पुगेको छ । मुद्दती निक्षेपमा १० देखि ११ प्रतिशत दिइ नै रहेका छौं । अहिलेको पुँजीको भ्यालु आगामी वर्ष घटेर जाने हुन्छ । त्यसैले पनि निक्षेपमा कम दर भएको खण्डमा पनि निक्षेप गर्ने बानीलाई सहयोग पुर्याउँदैन । ब्याजदरमा उतारचढाव भैरहन्छ, तर आजको दिनमा बैंकहरूले दिएको ब्याजदर बैंकमा पैसा राख्नका लागि उत्साह बढाउने खालको नै छ ।
हाम्रोमा ब्याजदर यति धेरै उतारचढाव हुन्छ किन ?
कर्जामा ब्याजदर समान्यतः दुई प्रकारको हुन्छ । एउटा भनेको फिक्स र अर्को बजारको उतारचढावअनुसार घटबढ हुने ब्याजदर हो । नेपालको सन्दर्भमा केही बैंकले केही कर्जाको फिक्स पनि गरे कि ! अन्यथा हाम्रो बजारको अवस्थाअनुसार घटबढ हुने ब्याजदर नै प्रचलनमा छ । हामीले ब्याजदर वढाएका मात्रै छैनौं, घटाएका पनि छौं । बंैकहरूलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले स्प्रेड रेटमा कसिलो नीति लिएको छ । बैंकहरूले निक्षेप लिँदा एक वर्षको र कर्जा दिँदा ३० वर्षसम्मको पनि दिएका छन् । त्यो मिस म्याच भने भैरहेको छ ।
निक्षेपको ब्याजदर बजारको उतारचढावअनुसार घटबढ हुन्छ । तर, कर्जाको सन्दर्भमा ऋणीले ताकेका गरेको खण्डमा पनि घट्दैन किन ?
बैंकहरूले तीन–तीन महिनामा ब्याजदर सार्वजनिक गर्ने अभ्यास छ । त्यसरी सार्वजनिक गरेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले त्योभन्दा बढी जान दिँदैन । व्यक्तिगत ग्राहकको सन्दर्भमा सार्वजनिक भएको ब्याजदरको ०.५ प्रतिशत मात्र तलमाथि गर्न पाइन्छ । निक्षेपको ब्याजदर ५ देखि ६ प्रतिशत हुँदा कर्जाको ब्याजदर १० भित्र नै थियो । आज निक्षेपको ब्याजदर नै दोहोरो अंकमा पुगेको छ भने कर्जाको ब्याजदर पनि त्यही अनुसार माथि गएको छ । यो भनेको ब्याजदरको प्रकारले फरक पारेको हो । हामीले फिक्समा नै कर्जा लगानी गर्दा पनि हुन्छ । यसका लागि केही कस्ट बढी लाग्न सक्छ । फिक्स ब्याजदर गर्दा बजारको भन्दा तलमाथि हुन सक्छ । हाम्रोमा फ्लोटिङ रेट भएकाले माथि मात्र होइन, तल पनि आउँछ । त्यस्तो अवस्थामा ग्राहक अर्को बैंकमा गएर कर्जा लिन्छ ।
समस्याका बाबजुद पनि बैंकहरूले नाफा त बढाएकै छन् नि ?
बैंकको व्यवसायको प्रकृति भने केही फरक छ । हामीले खेलाउने अधिकांश पैसा निक्षेपकर्ताको हो । निक्षेपकर्ताले बैंकमा पैसा जोखिम लिएर राखेको हुँदैन । जोखिम लिने भए सेयर बजारलगायतका अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्थे । तर, बैंकमा निक्षेप राख्दा ढुक्क भएर ब्याजसहित सावाँ पनि समयमा आउँछ भनेर हो । त्यसैले उनीहरूको पैसा फसाउन भएन । त्यसका साथै हाम्रो नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पूर्ण रूपमा पालना गरेर पारदर्शि भएर गरेको बिजनेस हो । यो क्षेत्रका लगानीकर्ताले पनि त प्रतिफलका लागि लगानी गरेका हुन् भन्ने बिर्सन हुँदैन । धितोपत्र बजारमा सेयरको मूल्य पनि खासै बढेको देखिँदैन । त्यसैले पनि बैंकमा लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई न्यूनतम १० प्रतिशत प्रतिफल दिनैप¥यो । सेयर बजारमा सेयर मूल्य उच्च भए त त्यसबाट पनि केही रिकभर हुन सक्छ ।
आगामी दिनमा ब्याजदर बढ्ने तथा निक्षेपको अभाव हुने समस्या सहज होला ?
तीन महिनाअघि र आजको अवस्थामा नै केही सुधार आएको देखिन्छ । समस्या नै हटेको भने छैन । अहिलेको बजेट मंगलबार आउँदै छ । बजेट पनि आएपछि विकास खर्च समयमा नै खर्च हुन्छ भन्ने हल्ला छ । यो वास्तविक भएको खण्डमा धेरै सहज हुन्छ ।
ईच्छा शक्ति भएमा केहीले पनि रोक्दैन भन्ने उदाहरण बनेकी छन् शाखा अधिकृत शारदा पन्थी
Posted: 2018-12-05 20:01:30
सुनाखरी न्युज/ गुल्मी- गुल्मी जिल्लाको रेसुंगा न.पा.वडा नं.६मा मित्रलाल मरासिनी र लक्ष्मी मरासिनीको दोस्रो सन्तानको रुपमा जन्मनु भएकी शारदा पन्थीको १९ वर्षकै उमेरमा प्रविणता प्रमाणपत्र तह पढ्दा पढ्दै विवाह प्रहरी निरीक्षक गोविन्द पन्थी संग भएको थियो ।श्रीमानले साथ दिए र वातावरण पाएमा महिलाले प्रगती गर्न सक्छन् भन्ने उदाहरण उहाँ बन्नु भएको छ। १ छोरा र १ छोरी की आमा बनेकी शारदाले उक्त अवधीमा मास्टर डिग्री गरी लोकसेवाको तयारी गरी खुल्ला प्रतिस्पर्धामा नाम निकाल्न सफल शारदा पन्थी संगको सफलता कसरी मिल्यो भन्ने सन्दर्भमा हाम्रा संवादाताले गरेको कुराकानी – ...
१५ औं पञ्चवर्षिय योजनाको खाकामा समृद्ध नेपालः प्रा.डा. कँडेल
Posted: 2018-11-04 13:26:38
राष्ट्रिय योजना आयोग मुलुकको विकासका लागि योजना तय गर्ने मुख्य निकाय हो । मुलुकले पहिलोपटक संघीय संरचनाको अभ्यास गरिरहेको अवस्थामा संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको सरकारबीच समन्वय गरी समृद्धिको लक्ष्यअनुरूपका योजनाहरू ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ । संघीयतालाई संस्थागत गर्दै वर्तमान सरकारको लक्ष्यअनुसार मुलुकलाई समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढाउन आयोगले के कस्तो तयारी गर्दै छ त्यस बिषयमा योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. पुष्पराज कँडेलसँग गरिएको कुराकानीको संक्षेपः...
रेटिङ ‘ओपिनियन’ हो, सिफारिस वा सल्लाह होइनः साजन गोयल
Posted: 2018-10-17 05:47:02
नेपालको हकमा क्रेडिट रेटिङको अवधारणा नयाँ हो। यहाँ क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी सुरु भएको पनि पाँच वर्षमात्रै भएको छ। स्वेच्छाले क्रेडिट रेटिङ गराउने परिपाटी बसिनसकेको नेपालमा अधिकांश रेटिङहरु नियमनकारी निकायले लागू गरेका बाध्यात्मक प्रावधानका कारण भएको पाइन्छ। कम्पनीहरुले आफ्नो वास्तविक अवस्था बाहिर ल्याउन नचाहेका कारण स्वेच्छाले रेटिङ गराउने परिपाटी सुरु हुन नसकेको बताइन्छ। यसै सन्दर्भमा क्रेडिट रेटिङ, यसका फाइदारबेफाइदा, लागत तथा नेपालमा क्रेडिट रेटिङको अवस्थाबारे मुलुकको दोस्रो रेटिङ एजेन्सी केयर रेटिङ्स नेपालका सिइओ साजन गोयलसँगको कुराकानीको सम्पादित अंशः...